Kandida ho depiote manerana ny nosy Marisarisa ny fametrahana dosie
Hatramin’ny alarobia 6 martsa teo dia 18 monja ireo kandida ho depiote efa nametraka ny dosie ho filatsahan-kofidiany. Miampy ny an’ilay iray tao amin’ny boriborintany faharoa omaly izany dia 19 hatreto.
Izany hoe mbola marisarisa aloha hatreto ny fametrahana dosie. Olona tsy hampoizina hiditra amin’izany ihany koa no re ankehitriny fa anisan’ireo mba handray anjara ho fidianana hisolo ny vavan’ny vahoaka amin’ny volana mey io. Ao ny olona nalaza tamin’ny fitarihana hetsiky ny mpianatra teny amin’ny oniversite, mpikambana ao amin’ny sendikan’ny mpampianatra, filohan’ny gadra politika sy ny hafa. Ireo efa teo mieritreritra ny mbola hilatsaka kosa dia saika manontany an-kolaka ny hevitry ny maro any anaty tambajotran-tserasera ny ankamaroany. Taratra ao anatin’izay ny endrika fahamailoana isan-karazany sy ny fanamaivanana ny atao hoe politika eto Madagasikara. Mampahatsiahy tenina mpanao politika iray izay hoe misy manao azy ity ho foto-pivelomana mihitsy fa tsy fanasoavam-pirenena. Asa aloha rehefa manakaiky ny datin’ny 12 martsa raha hanao ahoana. Sa ve any indray hifandrombaka hampiditra antontan-taratasy ?